आज २०७७ असोज १७ गते शनिवार तपाईको राशिफल कस्तो छ ? हेर्नुस – Rapti Khabar
Posted on July 8, 2019 July 8, 2019 Author Rapti Khabar
नेपाल भित्रिने भारतीय तरकारी तथा फलफुललाई बिषादी परिक्षण नगर्ने सरकारको निर्णय सार्वजनिक भएपछी त्यस्ता तरकारी तथा फलफुल आम नेपाली जनताको स्वास्थ्यमा हानिकारक हुने भन्दै विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले त्यस्ता तरकारी तथा फलफुल बोकेका भारतीय ट्रकलाई कारवाही गर्ने घोषणा गरेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सेतीमहाकाली ब्युरोको बैठकले त भारतबाट अाउने विषादीयुक्त फलफूल र तरकारी […]
Posted on August 19, 2020 Author Rapti Khabar
भदौ ३, काठमाडौं । प्रक्रिया पुरा गरेका स्मार्ट लाइसेन्सको छपाइ सकिएको छ । गत जुलाई महिनासम्म लाइसेन्स कार्यालयहरुले नयाँ जारी गर्ने र नवीकरण गर्ने गरी विभागमा छाप्न पठाएका सबै स्मार्ट लाइसेन्सको छपाइ सकिएको हो । छपाइ ढिलो हुँदा करिब ४ वर्षदेखि स्मार्ट लाइसेन्सको वितरणमा समस्या छ । तर, लकडाउनका कारण नयाँ लाइसेन्स जारी गर्ने क्रम […]
सीटीईभीटीले भर्ना खोल्यो, कुन विषय पढ्न कति जीपिए ? हेर्नुस
Posted on September 11, 2020 September 11, 2020 Author Rapti Khabar
२६ भदौ, काठमाडौं । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सिटीईभिटी)ले डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहमा भर्ना आव्हान गरेको छ । १५ असोजभित्र आवेदन दिईसक्नुपर्ने सिटीईभिटीले जनाएको छ । नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) महामारी लक्षित निषेधाज्ञा र लकडाउनका कारण यो वर्ष सबै आवेदन अनलाइनबाटै दिन सकिने व्यवस्था मिलाईएको सिटीईभिटीका प्रवक्ता अनोज भट्टराईले जानकारी दिए । प्रमाणपत्र […]